သင့်ရည်းစားဟောင်းက သင့်အပေါ်မှာ ခံစားချက်တွေ ရှိနေသေးကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၁၂)ခု - Lifestyle Myanmar
သင့်ရည်းစားဟောင်းက သင့်အပေါ်မှာ ခံစားချက်တွေ ရှိနေသေးကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၁၂)ခု
လမ်းခွဲခြင်းက များသောအားဖြင့် relationship တစ်ခုရဲ့နိဂုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဒါကို လက်ခံခဲ့မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် သင့်လက်တွဲဖော်ကရော? သူတို့ကော ခံစားချက်တွေ ပြောင်းခဲ့ကြပြီလား? သိမ်မွေ့တဲ့လက္ခဏာအချို့ကို ရှာဖွေတာက သင့်အပေါ်မှာ သူတို့ခံစားချက်ရှိနေဆဲ (သို့) မရှိတော့ဘူးဆိုတာ သင်သိဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ follow လုပ်တာ၊ သင့်ဓါတ်ပုံတွေကို မှတ်ချက်ဝင်ပေးတာ၊ သင်နေကောင်းလား? အဆင်ပြေလားဆိုတာကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို မေးမြန်းတာ (သို့) သင့်အိမ်(သို့ )အလုပ်ခွင်နားမှာ တဝဲလည်လည်လုပ်နေတာ စတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သော အပြုအမှုအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် Exက သင့်အပေါ် ခံစားချက်တွေရှိနေဆဲ လက္ခဏာများ
သဘောထားပြောင်းဖို့ဆိုတာ အထူးသဖြင့် သင်တို့အချစ်ရေးဟာ တော်တော်လေး ခရီးရောက်ခဲ့တဲ့အခါ၊ သင်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ခဲ့ကြတဲ့အခါ ထင်သလောက် မလွယ်ပါဘူး။ အချို့က အားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ပြောင်းသွားနိုင်ပေမယ့်အချို့ကတော့ လက်လွှတ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေပြပါက သင့်လက်တွဲဖော်ဟောင်းဟာ ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ သူတို့ သင့်ကိုစာပို့တာ၊ ဖုန်းခေါ်တာ
သင့်လက်တွဲဖော်ဟောင်းသည် သင်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ချင်တယ်၊ ဒါက သူတို့မှာ သင့်အတွက် ခံစားချက်တွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာ မဟုတ်ပါလား? ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ သင်ဆီကို ပြန်လာဖို့ မရည်ရွယ်သော်လည်း သင့်ကိုစကားပြောရုံ၊ သင်နေကောင်းသလား သိချင်ရုံနဲ့ ဖုန်းခေါ်၊ မက်ဆေ့ချ်ပို့နေဆဲပါ။ လမ်းခွဲပြီးနောက် သင်နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ သင့်ကိုဂရုစိုက်ပြီး ခံစားချက်ရှိနေတုန်းပဲလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်နို်ငပါတယ်။ ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေ ဂရုစိုက်တာက သူတို့ဘဝထဲသို့ သင့်ကို ပြန်လာစေချင်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သူတို့သင့်ကို တိုက်ရိုက်မပြောရင် ဘယ်အရာကိုမှ အတည်မယူပါနဲ့။
၂။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ follow လုပ်ထားတာ
သင့်ရည်းစားဟောင်းက သင့်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ follow လုပ်ထားရင် သူတို့သဘောထားမပြောင်းသေးဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင်ရည်းစားသစ်ရနေပြီလား? စင်ကယ်ပဲဖြစ်နေသေးလား? ၊ လမ်းခွဲပြီးနောက် သင်ပျော်နေလား(သို့) မပျော်ဘူးလား? ဆိုတာတွေကို သိချင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးက သင်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ခံစားချက်အချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သင့်ကို ပြန်လာစေချင်လား? မပြန်လာစေချင်ဘူးလားဆိုတာ အတပ်မပြောနိုင်ပါဘူး။
၃။ သင့်ပစ္စည်းတွေ ပြန်မပို့တာ
သင်ဟာ နောက်ကြောင်းမပြန်ချင်တော့တဲ့အခါ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရည်းစားဟောင်းက သူတို့နှင့်အတူ ရှိနေတုန်းက သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပြန်မပေးချင်ပါဘူး။ လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာတောင် သင့်ပစ္စည်းတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားချင်ပါသေးတယ်။ ဒီအပြုအမှုက လမ်းခွဲမှုကို သူတို့ လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ဆက်သွယ်တာ (သို့) သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ သင့်ကိုဆက်သွယ်လာတာ
” မင်းနေကောင်းလား? ၊ မင်းအဆင်ပြေလား?”ဆိုပြီး သင့်ရည်းစားဟောင်းရဲ့ ဘော်ဒါတွေဆီက ဖုန်းခေါ်တာ (သို့) မက်ဆေ့ပို့တာ လုပ်နေသလား?
ဆိုလိုတာက သင့်အကြောင်းသိချင်ပေမယ့် သင့်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့သင့်ကို သတိရနိုင်သော်လည်း သူတို့ခံစားချက်တွေကို မဖော်ပြလိုကြပါဘူး။ ထို့နည်းတူ သင့်အကြောင်းကို သိချင်တာကြောင့် သင့်သူငယ်ချင်းဟောင်းကိုလည်း ဆက်သွယ်ကောင်း ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့သို့သော အပြုအမှုက သူတို့မှာ ခံစားချက်ရှိကြောင်း ပြသနေတာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးတော့ သင့်ဆီက တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကို လိုချင်ကြပါတယ်။
၅။ ကံအားလျော်စွာ ဆုံမိကြတာ
သင်ဘယ်နေရာသွားသွား သင့် Exကို တွေ့နေမိသလား? အားကစားခန်းမမှာ၊ သင်အလုပ်နားမှာ ဒါမှမဟုတ် သင့်အိမ်နားမှာလား? တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ဆိုရင် ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ နေရာတိုင်းနီးပါး၊ နေတိုင်းနီးပါးဆုံနေရင် သူတို့ တမင်တကာပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက သင့်ရည်းစားဟောင်းဟာ သင့်ကိုချစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး သင့်ကိုပုံမှန်တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် သင်နဲ့ နောက်တစ်ဖန် အတူနေချင်ပေမယ့် သူတို့ဝန်ခံရမှာ အရမ်းရှက်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ သူတို့ခံစားချက်တွေက ဆက်လက်ရှိနေဆဲပါ။
၆။ မနာလိုဖြစ်တာ (သို့) သင့်ကိုမနာလို ခံစားရအောင် လုပ်နေတာ
သင့်လက်တွဲဖော်ဟောင်းအတွက် သင့်မှာရှိခဲ့တဲ့ ခံစားချက်အားလုံးကို တစ်ညတည်းနဲ့ သင်မဖျက်ပစ်နိုင်ပါဘူး။ လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာတောင် သူ့အပေါ် ခံစားချက်တစ်ချို့ ရှိနေနို်ငပါတယ် ။သူတို့ သင့်ကိုချစ်နေဆဲဆိုရင် သင့်ရည်းစားဟောင်းမှ မနာလိုမှုရှိနေနို်ငပါတယ်။
သူတို့ပေါ်မှာ သင်သဘောထား ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့် သူတို့မှာ မနာလိုမှုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရည်းစားအသစ်(သို့) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံကို ပို့ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုမလုံခြုံမှုခံစားရအောင် ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
၇။ သင့်ကို block လိုက်၊ ပြန်ဖွင့်လိုက် ခဏခဏလုပ်တာ
လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာ သင့်ရည်းစားဟောင်းက သင့်ကို block လိုက်ပါတယ်၊ ကောင်းပြီး သူတို့ သင့်ကို စကားမပြောချင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ပါတ်အကြာမှာ block ကို ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုိလိုတာက သင့်ကို စကားပြောဖို့ လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် သင်လည်း စကားသွားမပြောသလို သူလည်း စကားပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ထပ်ခါတလဲလဲ block လိုက်၊ ပြန်ပြီး unblock လုပ်လိုက်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ex မှာခံစားချက်ရှိနေဆဲဆိုပေမယ့် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိပါဘူး။ ဒါကို သင်ပြန်တုံ့ပြန်ဖို့ ၊ တုံ့ပြန်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံစားရဖို့ မလိုပါဘူး။ သူတို့ကို အချိန်နှင့် နေရာပေးရုံနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
၈။ သင့်အတွက် ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ပြသတာ
သင့်ပါတနာဟောင်းရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာ ထူးဆန်းနေသလား? သင့်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် သူတို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသလား? စကားမရှိ စကားရှာပြီး သင့်ဆီလာနေသလား?
လူတိုင်းက လမ်းခွဲမှုကို မကိုင်တွယ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတုံ့ပြန်မှုက ခွဲခွာခြင်းရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအပြုအမှုက သင့်အပေါ်မှာ သူတို့ခံစားချက်ပြင်းထန်နေပြီး သင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြသနေပါတယ်။
ဒီအခွင့်အလမ်းက သူတို့ဟာ သင့်ဆီကနေ ဝေးဝေးထွက်သွားဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားနေတာ (သို့) သင့်ကို သူ့ဘဝထဲ ပြန်ဝင်စေချင်တာပါပဲ။ သူတို့နဲ့ အချစ်ရေးကို သင်မဆက်ချင်ဘူးဆိုရင် ဒီအခြေအနေကို ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြုအမှုကို တတ်နိုင်သဘောက်လျစ်လျူရှုထားတာ ၊ မတုံ့ပြန်ဘဲထားတာက ပညာရှိရာ ရောက်ပါတယ်။
၉။ သူတို့ သင့်ကို လွမ်းနေပြီး ပြန်တောင်းပန်တာ
ရန်ပွဲတွေ၊ အငြင်းပွားမှုတွေကြောင့် သင်တို့လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်တင်ကြပြီး ညှိယူလို့ မရနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ် သင့်ရည်းစားဟောင်းက ယခုမှ အပြစ်တင်တာတွေအားလုံးကို ၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို ရုတ်တရက် ပြန်လာတောင်းပန်ပါတယ်။ သူတို့ မင်းကို အရမ်းလွမ်းတယ်လို့ ပြောပေမယ့် သင့်ကို ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။
သူတို့သင့်ကို သတိရကြောင်း၊ ခံစားချက်ရှိကြောင်း ပြောပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် သူတို့ဘဝမှာ သင့်ကိုပြန်လိုချင်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အတွေးတွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး ပြန်မတုံ့ပြန်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
၁၀။ မူးရင် ဖုန်းခေါ်တာ
သင့်ရည်းစားဟောင်းက လမ်းခွဲပြီးတာတောင် မူးတဲ့အချိန် ဖုန်းခေါ်နေရင်၊ သူတို့က သင့်ကိုတန်ဖိုးထားသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ကိုအပြစ်တင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒေါသထွက်သည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေလျှင်ဖြစ်စေ သင့်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီး သင့်နံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရည်းစားဟောင်းဆီကနေ ရောက်တတ်ရာရာ မက်ဆေ့ချ်တွေကတောင် သင့်ကို လွမ်းနေဆဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အလုံးစုံ အာရုံထဲမှာ သင်ရှိချင်မှ ရှိမှာပါ။
၁၁။ သူတို့ရဲ့ စကားပြောဆိုမှုက သင်နဲ့ ပတ်သတ်တာချည်းပဲ
လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာ သင့်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ပက်ပင်းတိုးမိကြပြီး စကားပြောဖြစ်ကြတယ် ဆိုပါစို့။ သူတို့က သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတူရှိခဲ့တုန်းက ကောင်းတဲ့အချိန်တွေ၊ သင့်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အကျင့်၊ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေအကြောင်း ပြန်ပြောပါတယ်။ ဒါမှမဟူုတ် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အကြောင်းကို တွေးပြီး သူတို့ ပြုံးတာမျိုး၊ အတူရှိနေတုန်းက သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဝန်ခံတာမျိုး လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘဝနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သင့်ကို ပြောမယ့်အစား သင့်အကြောင်းပြောဖို့သာ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် သူတို့မှာ သင့်အပေါ် ခံစားချက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၂။ သူတို့ သင့်ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ကြိုးစားတာ
သင့်ရည်းစားဟောင်းက သင့်ကို စကားပြောဖို့ ၊ ဖွင့်ပြောဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ သင်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်လိုကြောင်း ဖော်ပြကြတယ်။ သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာအကြောင်းကို ပြောပြတာ (သို့) သင်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ချိန်းတွေ့နေသလားလို့ မေးပါလိမ့်မယ်။ အဓိကအားဖြင့် သူတို့ဟာ သင်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်လိုတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့မှာ သင့်အတွက် ခံစားချက်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး လမ်းခွဲဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သင့်ထံပြန်လာဖို့ မသေချာပါဘူး။